Italy oo si awood ah kusoo gaartay finalka koobka qarama yurub markii ay garaaceen Germany | HobyoNet.Com	Contact
Friday, June 29th, 2012 | Posted by Hnet Italy oo si awood ah kusoo gaartay finalka koobka qarama yurub markii ay garaaceen Germany
Goolal si awood ah ku dhashey oo Mario Balotelli u dhaliyey isla qeybtii hore ee ciyaarta ayaa u dhameysay xulka awooda lahaa ee Germany oo abid kulamo caalami ah oo tartan ka badinin xulka Italia.
Xulka kubadda cagta ee Italy oo Azzuri lagu naaneyso ayaa inta badan ka adkaada xulka Germany waxayna iminka garaceen xulkii loo saadaalinayey koobka ee dhamaan ciyaarihii ay soo dheeleen tartankan wada badiyey.
The Azzurri waxaa dhaawac uga maqnaa Ignazio Abate’s sidoo kale Christian Maggio ayaa ganaaxnaa,laakiin sidaasi oo ay tahay tababare Prandelli ayaa Federico Balzaretti ka ciyaarsiiyey dambeedka midig,halka dambeedka bidixna uu saarey Giorgio Chiellini oo dhaawac uga maqnaa. Daniele De Rossi and Riccardo Montolivo ayaa khadka dhexe kula wadaagey Pirlo iyo Marchisio.
Germany waxay markale nasiiyeen Mario Gomez kaasi oo sidoo kale isaga iyo Lukas Podolski ciyaartii sideed dhamadka ee 4-2 ku garaaceen Greece,aan dheelin,laakiin Toni Kroos ayaa lagu soo bilaabey ciyaarta iyagoo sameeyey isku dayo fursado lagu abuurey qeybtii hore iyo dhamaadkiiba.
Mario Balotelli oo Man City uga ciyaara weerarka ayaa daqiiqadii 20-aad gool si taxader leh madaxa ugu dhaliyey Germany,waxaana ay taageerayaasha Germany aaminsanaayeen inay soo bareejeyn karaan maadaama waqti badan ay heysteen ciyaartuna qeybtii hore la marayey,laakiin Laad aad u xoogan oo biriq ah ayuu mar kale la helay shabaqa uu waardiyaha ka ahaa goolhayaha Bayer munich Manuell Neuer oo indhaha uun ka eegay, meelna u dhaqaaqin.
SuperMario ayaa 3 gool dhaliyey tartanka waxaana dhinaca kale uu saftey kulankiisii 13-aad ee uu xirto funaanadda Azzurri.
Dhamaadkii ciyaarta xulka Germany ayaa helay rigoore shaki ay geliyeen ciyaartoyda Italy,waxaana Germany u saxiixey M.Ozil guud ahaan 2-1 oo Italy guushu ku raacdey ayaa lagu kala tegey.
Italy ayaa habeenka Axadda waxay magaalada Kiev ee caasimadda Ukrine kula dheeli doontaa ciyaarta Finalka xulka Spain oo koobka difaacanaya,waxaana xusid mudan in labada xul ay isku group kuwada jireen kulankoodiina kusoo dhamaadey bar-baro 1-1.